बाउले मकै बारीमा, छोराले घरको चोटामा एउटै महिलालाई गर्दा रहेछन् यस्तो, अब आमा भन्ने कि श्रीमती ? (भिडियोसहित) « गोर्खाली खबर डटकम
ओखलढुंगा । सुन्दा पनि पत्याउने नसकिने घटना घटेको छ ओखलुंगामा । ओखलढुंगाको थाक्ले भन्ने ठाउँमा आफ्नै छोराको सम्बन्ध आफ्नै आमासंग रहेको कुरा जब बुहारीले थाहा पाईन् तब उनले गाउँलेहरुलाई भनिन् । उनको कुरा गाउँलेहरुले पत्याएनछन् ।
तर जब गाउँलेहरुले बुहारीको कुरा पत्याएनन् तब ती आमा छोराको सम्बन्धले अझैं खुलेरै नाता कायम गर्नमा सफल हुँदै गएछ । कसरी आफ्नै छोरासंग आफ्नै आमाले यस्तो गलत काम गर्न सकेको होला ? अहिले यो प्रश्न पुरै ओखलढुंगाबासीको मनमा रहेको छ ।
यो समाचार लेख्दा र पोष्ट गर्दापनि हाम्रो टीमलाई पत्याउन गाह्रो भईरहेको छ । तर यो साँचो हो । आफ्नै श्रीमानको सम्बन्ध जब आफ्नै सासुसंग रहेको कुरा बुहारीलाई थाहा भएछ तब ती बुहारीले पहिला त सासु र श्रीमानलाई धेरै ने सम्झाईछन् ।
तर ती आमा छोराले बुहारीको कुरा नसुनेपछि गाउँलेलाई उनले आफ्नो घरको त्यस्तो घिनलाग्दो कुरा भन्न बाध्य भएकी रहिछन् । यो कुरा त्यही गाउँका एक जनाले भनेका हुन् । ती छिमेकीका अनुसार ती आमा र छोराको सम्बन्धको शुरुवात यसरी भएको रहेछ । भिडियोसहित